आहा ! क्या स्वादिलो मलेखुको माछा - Pabil News
आहा ! क्या स्वादिलो मलेखुको माछा
साउन १ गते, २०७८ - १८:५५
धादिङ– धादिङको मलेखु बजार माछाका लागि प्रसिद्ध छ । राजधानी काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने धेरैलाई मलेखुको माछाको स्वादले तान्ने गर्छ । त्रिशूली नदीको चिसो पानीमा पाइने माछा विशेष स्वादको हुने कारण पनि धेरैको मन लोभिने गरेको छ। मलेखुका होटलमा माछाको झोल चाख्ने प्रायः सबैले भन्छन्,’आहा ! क्या स्वादिलो माछा ।’
वर्षाैंदेखि माछा बजारको नामले चिनिएको मलेखुमा कोरोना महामारीपछी यतिबेला बल्ल खुलेका छन् । कोरोमा महामारीको दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा अझै जारी रहेपनि मलेखुका ब्यवसायीले पुर्ण सावधानी अपनाएर ब्यवसाय सुरु गर्न थालेका छन् । मलेखु बजारमा मलेखु खोला, त्रिशूली नदी, स्थानीय पोखरी र तराईबाट ल्याइएका माछा पाइन्छ ।
होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न नपाइने भनेपनि यातायात चल्न थालेपछि मलेखुका ब्यवसायी बजार खोल्न बाध्य छन् । ‘राजमार्गमा होटल खोल्दिन भनेर पनि सुख छैन’,हाम्रो मलेखु होटल तथा लजका कबिता कडेल भन्छन्,’गाडी नचल्दा त होटल खोल्न बाध्य थिएनौ, अहिले गाडी चलेको छ । माछा, खाना बनाएर राख्नुस है हामी आउदै छौ भनेर फोन आउछ ।’ यात्रामा रहेका जो कोहि भएपनि भोकै पठाउन त भएन नी त्यसैले होटल खोलेर व्यापार गर्न बाध्य छौं ।’ मलेखुमा रोकिएका प्रायःले माछा नै खोज्ने उनी बताउछिन् ।
मलेखु बजार र देश विदेशमा प्रसिद्ध बनेको छ । २०३५ फागुनदेखि माछाको व्यवसाय थालनी गरेपछि यहाँ वरपर माछाको व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको हो । अहिले मलेखुमा नैनी जातका माछा बढी भेटिन्छ । मलेखु बजारमा दैनिक १० कुन्टल माछा बिक्रि हुन्छ ।
२०५४ सालदेखि माछा व्यापार गरिरहेको अम्मरराज सिलवाल ‘सान्दाई’ भन्छन्, ‘एउटा होटलले १० किलोसम्म माछा बेच्ने गरेका छन्, मलेखुमा दैनिक २० कुन्टलसम्म माछा बिक्री हुन्छ ।’ सिलवाल बागेश्वरी होटल एण्ड लजका संचालक पनि हुन् ।
यहाँको तेलमा तारेको (फ्राइड) माछा सबैले मनपराउँछन् । माछामा काँडा हुने भएका कारण पनि धेरैले तारेको मन पराउँछन् । जाडो समयमा आलो माछामा झोल हालेर खान मनपराउने पनि धेरै हुन्छन् । खाना खानेहरूले त झोल हालेर नै बनाउन लगाउँछन्। अधिकांशले आफूले खाएपछि परिवारका लागि समेत फ्राई गरेको, आलो, सुकाएको माछा घर लैजाने गरेका छन्।
असोज देखि चैतसम्म सिजन हो । तर, बाह्रै महिना व्यापार भने खासै देखिदैन । मलेखुमा रहेका २ वटा बजारमा १ सय भन्दा बढी होटलमा माचाका परिकार पाइन्छ ।